» गीत हिट भएसँगै किन खोज्यो प्रहरीले बिष्णु माझीलाई ?
‘जेलैमा हो जेलैमा,चरी जेलैमा, मै छोरी रुँदारुँदै बेसी मेलैमा’
विष्णु माझीका श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारी पनि लोक सङ्गीत क्षेत्रमै जोडिएका व्यक्ति हुन्। विष्णुले कुन गीतमा काम गर्ने वा नगर्नेदेखि आर्थिक पाटो सबै सुन्दरमणिले नै हेर्ने गरेका छन्। विष्णु माझीले मोबाइल बोक्दिनन्। फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पहिचानबाट उनी जोडिएकी छैनन्। यतिसम्म भनिन्छकि– उनको पासपोर्ट समेतछैन। गीतको रेकर्डिङ गर्दा रातको समयमा गर्छिन्। उनले गीत रेकर्ड गरिरहँदा स्टुडियोमा कसैलाई प्रवेश गर्न दिँइदैन। रेकर्डिङ गर्ने प्राविधिकले समेत विष्णु माझीको मुख देख्दैनन्।
यिनै आधारमा धेरैले आरोप लगाउँछन् –विष्णु माझीलाई उनकै श्रीमानले कैद गरेर राखेका छन्। आरोप अनवरत लाग्दै आएको छ। तर, विष्णु माझीले भने यसबारेमा कहीँ कतै बोलेकी छैनन्। न यस बारे लैंगिक लगायत अन्य हिंसालाई लिएर प्रहरी वा अरु कुनै निकायमा उजुरी नै परेको छ। माझीको ‘सेक्रेट’ शैली उनकै राजीखुशीमा भइरहेको बताउनेहरु पनि धेरै छन् साङ्गीतिक क्षेत्रमा। तर,जबजब विष्णु माझीका गीत सार्वजनिक हुन्छन्, उनको निजी जीवनको पाटो एकाएक चर्चामा आउँछ विभिन्न कोणहरुलाई लिएर।
चरी जेलैमा बोलको गीत उनकै श्रीमान सुन्दरमणिले लेखेका हुन्। गीतमा उनैले संगीत भरेका छन्। यसपाला तीजको गीत चर्चित भएसँगै फेरि विष्णु माझीलाई लिएर सांगीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ। विष्णु माझी कहाँ छिन् ? के उनीसाच्चै श्रीमानको कब्जामा छिन् ?
प्रश्न उठ्दा नेपाल प्रहरीदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत सोसल मिडियामा मेन्सन गर्दै मानिसहरुले सोधे –उनीमाथि हिंसा भइरहँदा किन खोजविन भएन ?
‘मानव अधिकार आयोगले उहाँको अवस्था बुझ्नु भनेर हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ अहिले स्याङ्जामा भएको पाइएन,‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले भने।
स्याङ्जा प्रहरीले विष्णु माझी स्याङ्जामा भएको कुनै सूचना पाएन। बरु उनी श्रीमानसँगै काठमाडौंको असन–इन्द्रचोकतिर बस्ने गरेको जानकारी पायो।
विष्णुकाश्रीमानको घर कास्कीमा प्रहरीले सम्पर्क गर्‍यो त ?
‘उहाँ काठमाडौंमा नै बस्नुहुन्छ। तर, कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा हुँदैन,’ उनले भने,‘हामीले जानकारी पाएअनुसार कोठा फेर्दै बस्ने गर्नुभएको छ भन्ने छ। त्यस्तो सम्पर्क नै नहुने भेट्दै नभेटिने भन्नेचाहिँ होइन।’
‘जेलैमा हो जेलैमा, चरी जेलैमा‘’ यही गीतसँग उनको जीवनको तुलना गर्दै लेख्‍नेहरु पनि धेरै छन्। यसअघि गीत रिलिज हुँदा पनि उनीबारे यस्तै कहानीहरु सार्वजनिक हुँदै आएको हो। त्यसैले उनको जीवनलाई लिएर हुने टीकाटिप्पणी पनि नियमित आकस्मिकता बनिरहेका छन्। त्यसैको आधारमा यसपाला मानवअधिकार आयोग र प्रहरीले पनि चासो दिए। तर, जसरी चासो दिए त्यसरी सुल्ट्याउन सकेनन्, विष्णु माझीको जीवनको पहेंली।
‘पहिले पनि यस्तो कुरा आएकाले हामीले बुझेका थियौँ। उहाँ आफैँले यस्तो जीवन रोज्नु भएको हो,’अध्यक्ष बिसीले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो उहाँको जीवन छैन। उहाँ हाँसी खुशी हुनुहुन्छ।’